Izinwele ezigundiwe zamadoda | Amadoda aSitayela
U-Alicia tomero | 29/05/2021 11:52 | Ukunakekelwa komuntu siqu, Izitayela zezinwele, Amathrendi
Izinwele ezigundiwe zamadoda ziyizinwele zomuntu siqu ukuthi zithanda futhi zilungele amazinga okushisa asehlobo aminyanisa. Isitayela sakhe sithonywe yi-cinematic kakhulu ye-cinema, abasubathi noma abaculi futhi iyaqhubeka nokubeka umkhuba noma ngabe iminyaka ihamba kanjani.
Le ndlela yokugunda izinwele ibilokhu ibalulekile kulabo abafuna ukumaka ubuntu baboYebo, ngaphambi kokudlulisa umshini ekhanda, kufanele uhlole ukuthi ikhanda lakho liyangena yini emaphethini naku-physiognomy ukuze likwamukele lokho kushefa.
Ngakho-ke, kufanele wenze ukuhlolwa kukanembeza ukuze wazi ukuthi isitayela sakho yini. Amadoda amaningi afinyelele ekuzimiseleni kwalokhu kusikwa izinguquko ezingokwengqondo empilweni yabo, ngokuzizwa bekhululekile futhi besebenza ngekhanda noma ngokuvala uhlobo oluthile lwesiteji.
1 Izinwele ezigundiwe zamadoda
1.1 Ukushefa ngokuphelele
1.2 Izinwele ezigundiwe nge-gradient
1.3 Iphuciwe ngemisiko, imivimbo noma imidwebo
1.4 Kugundiwe ngentshebe
1.5 I-Undercut Ephuciwe
1.6 Izinwele ezigundiwe ziye ezingeni 3 noma 5
2 Ungazithola kanjani izinwele ezigundiwe ekhaya?
Uma usuwele ingqondo yakho ukwenza lolu hlobo lokusika, kufanele wazi ukuthi akukho ukushefa okulula kuphela. Ukushefa kungenziwa ngezitayela ezahlukahlukene futhi lapha singakukhombisa izinketho ezahlukahlukene ongazisebenzisa:
Ukushefa ngokugcwele kuyinto yakudala futhi kulula ukuyenza. Kungenziwa ngosizo lomlobi wakho wezinwele noma uzenzele wena ngosizo lwensingo ekhethekile yokugunda izinwele. Lokhu kusika kuthakazelisa kakhulu kwabesilisa abanezinkinga zempandla, ngezinguquko ezinqala ekubukekeni noma ekufikeni kwehlobo.
Izinwele ezigundiwe nge-gradient
Lokhu kugundiwe kuhle kulabo abalokotha ngaleli khanda, kushiya ezinye izinwele ngaphezulu, ngale ndlela umphumela we "ikhanda lekhanda" uyasuswa. Ukwenza lokhu kwekhanda kufanele uqonde kakhulu ngensingo ukugcina ukungalingani okuqondile phakathi kwaphezulu nezinhlangothi zekhanda. Le kwekhanda ephuciwe yinhle kakhulu futhi ifana nobuntu obuningi.
Iphuciwe ngemisiko, imivimbo noma imidwebo
Le kwekhanda iyintsha, iyakhanga futhi inokuthinta okusha.. Kufanele ugqoke izinwele zakho ezishewe ngokusika esikubonile, okuhambisana nokushefa okonakele. Ohlangothini ngalunye lokwehliswa kwakhe kunini lapho kusikeka noma kwenziwa imivimbo, ukumaka lokho kwehlukana phakathi kwezinhlangothi zombili. Imidwebo ingenziwa ezinhlangothini zekhanda noma ngenhla kwe-nape ngemuva.
Inhlanganisela yezinwele ezigundiwe nentshebe ekhulile Ukubukeka okuphoqelelwe kuzo zonke izitayela nobuntu. Ungahlanganisa izinwele zakho nentshebe yezinsuku ezintathu noma nentshebe ende impela, iphelele nentshebe ewugqinsi. Ukuxubana kwakhe kunikeza lokho kubukeka okunzima nokungathi sína futhi ukuze iphelele kuyelulekwa ukuthi amanxeba akho asemaceleni ehliswe isithunzi nguchwepheshe onesandla esihle.
Lokhu kugunda izinwele kusondele kakhulu, kucishe kugundwe futhi kuhle kuzo zonke izinhlobo zezinwele. Indlela yokugqoka ngayo kusale izinhlangothi zekhanda zigundwe kakhulu kanti ingxenye engenhla iyishiya incane, ngaleso sitayela se-Undercut esizwakalayo. Amamaki akho phakathi kwamazinga womabili angalulazeka noma asikwe kakhulu, ngaphandle kokonakala.
Izinwele ezigundiwe ziye ezingeni 3 noma 5
Lesi sitayela esigundiwe ngesalabo abafuna ukugqoka izinwele zabo zimfushane impela, kodwa ngaphandle kokufinyelela ukushefa okuphelele. Kuhle ukuqala ngawo wonke lawo madoda aqala ukulahlekelwa izinwele futhi angashiywa kuwo womabili amazinga, phakathi kuka-3 no-5, ukushiya ingxenye engenhla isikhashana uma uthanda.
Ungazithola kanjani izinwele ezigundiwe ekhaya?
Kuyindlela elula yokuthola i-no-fuss, i-hairstyle engenampikiswano. Kufanele ube nomshini omuhle wokushefa, ukuthi ingakwazi ngosayizi wezinwele zakho nokuthi ikwenza ngokushesha futhi ngaphandle kokudonsa.
Ungathola ukushefa izinwele zakho ngemizuzu eyi-10 nje futhi kungenziwa ngokwesintu, ngaphandle kwesidingo sosizo. Ungakhetha ileveli yakho ngokuya ngokuthanda kwakho, kungaba sezingeni 1, 2, 3 ngisho no-5, ongafinyelela ngalo ekugcineni okungokwemvelo nxazonke.
Uqala ukusebenzisa insingo ezinhlangothini nokusika izinwele kusuka phansi kuya phezulu, okwenza ukunyakaza okushelelayo ngejubane insingo ekucela ukuba wenze ngalo. Ngemuva kwalokho ungaqhubeka uye emuva uze ufike esicongweni.
Ingxenye engenhla nayo kulula ukuyenzaKufanele uqale ebunzini bese ukama ukusika emuva. Ukwengeza phezulu, yenza ukudlula kwesibili phezu kwekhanda lonke uze uyeke ukuzwa ukuthi insingo igunda izinwele zakho.
Uma okufunayo gunda ezindaweni eziphakeme ezimbili, Ngokushefa ngokugcwele ezinhlangothini nezinwele ezinde ngaphezulu, okokuqala kufanele ugunde izinwele zakho ngokuphelele ezingeni lokuthi uzoshiya ingxenye ephezulu.
Ngemuva kwezinhlangothi kufanele wehlise izinga elilodwa noma amabili ngaphansi kunenombolo oyisebenzise phezulu. Kufanele uwubone ngeso lengqondo lo mkhiqizo lapho uzovumela khona izingxenye ezimbili zehle, ukwenza ingxenye efanele iqondane nesobunxele.
Ukwehlisa isithunzi le ndawo kufanele ukwenze ngokunakekela nangesineke, usebenzisa insingo ngemivimbo emifushane futhi kancane kancane. Zisize ngezinye izibuko ukuze usike kahle. Uma ufuna ukwazi indlela engcono yokugunda ikhanda ungafunda eyodwa okuthunyelwe kwethu, lapho sikuchazela khona kabanzi.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izinwele ezigundiwe zamadoda